tvOS 11.2.5 uye watchOS 4.2.2 inowanikwawo kurodha pasi | Ndinobva mac
Sezvatiri kutaura masikati ano Apple yakaburitsa dzese dziripo shanduro dze software uye mune ino kesi tvOS 11.2.5 uye wachiOS 4.2.2, vakagadzirirawo kurodha pasi. Vhiki rinotanga nechido cheApple uye nderekuti mushure mekuzivisa zviri pamutemo zuva rekutanga rekuchengetedzwa kwePambaPod, tinowana shanduro dzekupedzisira dzesoftware yayo yese.
Mune ino kesi, iko kuvandudzwa kwakawedzerwa muTVOS 11.2.5 uye watchOS 4.2.2 zvakabatana zvakananga nekuvandudzwa mukugadzikana uye kuchengetedzeka kwesystem, asi zvakare zvakare wedzera kuenderana ne matsva maficha akaitwa muSiri mubatsiri uye kumwe kuvandudzwa kudiki uko Apple isingatsanangure asi kuriko mushanduro nyowani.
Kufamba kweshanduro dze beta kwakawedzera mukati mesvondo rapfuura uye nemusi weChishanu iwoyo takaona kuuya kweiyo yazvino beta vhezheni yevagadziri, nhasi Chipiri, isu tatova neshanduro dzekupedzisira dziripo. Rangarira kuti mune iyo Apple Watch zvakakosha vane 50% yebhatiri rakachajiswa uye zvinokurudzirwa kuve nechaji yekuchaja kudzivirira matambudziko. Kana iwe uri mumwe wevashandisi vane iyo Series 0 modhi kana yekutanga vhezheni yacho, moyo murefu chinhu chausingakwanise kurasikirwa kana uchigadzirisa wachi.
Shanduro nyowani dzakaburitswa neApple masikati masikati dzakakosha kunyangwe zvingaite senge hazvisi kuwedzera shanduko, uye zviri pachena isu kuraira kuiswa kwavo kuti zvigadziriswe zviitwe. Mumwedzi ichangopfuura, tichiti "kuvandudzwa kunowedzerwa neApple" kunogona kusapokana kwazvo, asi zvakakosha kuti ugare uine shanduro dzazvino kudzivisa matambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » tvOS 11.2.5 uye watchOS 4.2.2 inowanikwawo kurodha pasi
Seagate Fast SSD, rekunze dhisiki iro rinozo perekedza yako MacBook chero kwaunoda